Rohtos Suoja fanangonam-ponenana mialoha ny fisorohana amin'ny Internet, mandefa eran-tany | Metropolitan.fi
Rohtos Suoja fanangonam-ponenana mialoha ny fisorohana amin'ny Internet, mandefa eran-tany
Rohtos Labs dia orinasa manamboatra sy manamboatra fanafody ho an'ny sakafo. Ny iray amin'ireo vokatra nolazain'ny orinasa dia efa nahatonga ny fanasitranana ho fanajana.
Hatramin'izao dia tsy misy afa-tsy eto Finlanda ny pilot Rohoos Suoja amin'izao fotoana izao no omena erak'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fivarotana ao amin'ny aterineto.
Miorina ao amin'ny tanàna avaratr'i Oulu, Finlande - Rohtos Labs no mametraka ny vokatra momba ny fanandramana farany momba ny biochemistry sy ny fitsaboana molecular. Ny orinasan'ny orinasa tsy miankina koa dia miara-miasa akaiky amin'ny Oniversiten'i Oulu.
Rohtos Labs dia manamboatra vokatra vita amin'ny voajanahary voajanahary. Amin'ny fampifangaroana ny siansa maoderina sy ny fikarohana ankehitriny ny fomba nentim-paharazana Aziatika (Ayervedic, TCM), ny orinasa dia manamboatra vokatra ho an'ny fepetra maromaro. Izy ireo dia mizara ny hevitry ny fandanjalanjana ny simia amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny sakafo mahavelona.
Ny singa fototra voalohany amin'ny hangover dia acetaldehyde
Tamin'ny Jona 2017 dia nanambara ny orinasa fa vokatra ho an'ny mpisotro toaka izany. Ny vokatra dia miorina amin'ny zava-misy fa ny fanafody ny alika dia miteraka lasantsy antsoina hoe acetaldehyde. Ity no toxine izay maneritery kokoa ny vatany noho ny ethanol (fisotroana toaka) ary ny antony voalohany amin'ny fisotroana fisotroana alkaola.
Ny aty dia miteraka glutathione mba hanafoana ny acetaldehyde, fa ny fikarakarana ara-boajanahary ateraky ny aretin-koditra dia mihalalina aorian'ny fisotroana roa. Izany dia mitondra any amin'ny vatana mihosotra amin'ny acetaldehyde. Ny sakam-pamoakan'ny Rohtos Suoja dia mikendry ny hamerenana amin'ny laoniny an'io fifandanjana io. Ny vokatra dia tsy maintsy alaina alohan'ny hisotro toaka ary tsy fanafody ho an'ny mangirifiry.
Izany dia tanterahana amin'ny alalan'ny fitaovana entina hanampiana ny famokarana voajanahary glutathione. Ny antioxidants sy vitamins dia ampiana mba hamerenana ny tsy fahampiana simika hafa izay mitranga rehefa mihinana tafahoatra be loatra.
Rohtos Suoja dia mianatra siantifika roa-jery amin'ny siansa mba hanombanana ny tombontsoan'ny vokatra. Ireo mpampiasa ny fanampiana ara-tsakafo dia nitatitra ny fihenan'ny angom-panambadiana eo anelanelan'ny 70-75% taorian'ny fampiasana zava-pisotro mahery.
Ny fialan-tsasatra tsy ara-drivotra mandritra ny 7 andro anio amin'ny Fetin'ny Tuska amin'ny 2017 ny fampiasana Rohtos Suoja dia nahitana fihenam-bidy ny soritr'aretin'ny fahaketrahana taorian'ny fitsaboana. Nihena koa ny fihinanana pizza sy sakafo hafa haingana. Noho izany weightloss sy fanatsarana ny fiheveran-tena dia mety ho toy ny fiantraikany tsara amin'ny mpampiasa anao.
Rohtos Suoja dia mivoaka an-tserasera, mandefa eran-tany
Rohtos Suoja dia nofaritana ho fanampim-panafody izay "miaro ny atidoha sy ny vatana rehefa misotro toaka ary mampihena ny soavina antsoina hoe ny ampitso."
Ny vokatra tany am-boalohany dia tsy nisy afa-tsy teto Finlanda, fa nanomboka tamin'ny Janoary 2018, Rohtos Suoja sy ny vokatra hafa dia azo alaina amin'ny fividianana an-tserasera maneran-tany an'i Afrika, Azia, Aostralia, Eoropa, Amerika Avaratra, Amerika Atsimo.
Ny vokatra dia tonga amin'ny singa 30 pills, ampy ho an'ny 10-15 fisotroana fotoana arakaraka ny dosage. Ny vidin'ny tarika iray 23.90 € (manodidina $ 30) plus shipping. Azonao atao ny mividy amin'ny Visa, MasterCard ary American Express na Paypal.
Rohtos Labs manome ny vokany ho antoka antoka ho an'ny vola - Ireo mpampiasa tsy afa-po dia afaka mamerina kapsily tsy ampiasain'ny mpanjifa mba hividianana fonenana feno. Azonao atao ny mividy any amin'ny fivarotana ofisialin'ny orinasam-panjakana ao amin'ny rohtoslabs.com
Rohtos Suoja dia vokatra voajanahary novolavolaina sy novokarina tany Finlandy, firenena iray any avaratr'i Eoropa. Ny famaritana ny vokatra dia mirakitra ireto fitaovana voajanahary manaraka ireto ampiasaina ao amin'ny vokatra (dosie 3 capsules):
Tavoahangy mavo: 165 mg
ALA (asid alpha-linolique): 110 mg
Vitamin B9 (asidra folaka): 1 mg
« Rohtos Suoja превенција апчиња апчиња за продажба на интернет, превозот на глобално ниво - Rohtos Suoja bakrus forebyggende piller på salg online, frakt globalt »